ओली ज्यु - मलाई सांसद बनाइदिनुस् ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
ओली ज्यु – मलाई सांसद बनाइदिनुस् !
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरेका छन्।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि परिवार दल तत्कालिन नेकपा एमालेसँग तीन बुँदे सहमति गरी पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएका थिए। अहिले ढकालले परिवार दलकै ब्यानरमा देशव्यापी जनगारण अभियान चलाउँदै आएका छन्।
आइतवार बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्वाचन अगाडि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ढकालले माग गरेका हुन्।
निर्वाचन अगाडि भएको सहमति अनुसार ढकालले सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा गएका थिए। त्यतिवेला एमालेसँग संघीय संसदमा परिवार दललाई प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको भन्दै आफ्नो दलका तर्फबाट राष्ट्रियसभामा सहभागि गराउन माग गरेका हुन्।
सहमति अनुसार परिवार दलका तर्फबाट समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत नेताहरुलाई संसद बनाउने भनिएको थियो। ढकाल एमालेको समानुपातिक सूचीमा परेका थिए। तर निर्वाचनको परिणामले दलहरुका तर्फबाट महिलाहरुको प्रतनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने बाध्यता आएपछि उनी सांसद हुन पाएका थिएनन्।